Bannaanbax looga soo horjeedo dadkii lagu dilay Magaalada Djibouti oo ka dhacay Brussels – STAR FM SOMALIA
Bannaanbax looga soo horjeedo dadkii lagu dilay Magaalada Djibouti oo ka dhacay Brussels
Mucaaradka Jamhuuriyadda Jabuuti, ayaa maanta bannaanbax ka dhan ah dadkii ay Ciidamada Jabuuti ku dileen xaafadda Balbala, waxay ku qabteen Magaalada Brussels Ee Xarunta Wadanka Belgium-ka.
Ciidamada Jabuuti, ayaa Isniintii weeraray goob ay ka socotay xuska dhalashada Nabiga (NNKH), iyagoona faraha isula tagey dadkii ka qayb qaadanaayay xuskaasi. Waxayna ku dileen in ka badan 10 qof oo rayid ah.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jabuuti waxay mucaaradku ku eedeysay inay soo hubeeyen dad rayid ah, si ay ugu qalqalgeliyaan xasiloonida Magaalada Djibouti, balse taasi waa ay beeniyeen mucaaradka.
Bannaanbaxayaasha, ayaa waxay maanta isugu soo baxeen afaafka hore ee Xarunta Midowga Yurub uu ku leeyahay Magaalada Brussels.
Axmed Riyaale oo ka mid ah xubnaha mucaaradka Jabuuti oo la hadlay dadkii bannaanbaxa ka dhacay Magaalada Brussels, ayaa sheegay inaanan la aqbali karin wixii Isniintii ka dhacay xaafadda Balbala.
Axmed Riyaale, ayaa wuxuu Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu ku eedeeyay inuu caadeystay daadinta dhiigga shacabkiisa, isla-markaana uu gumaaday dad aan waxba galabsan, sida uu yiri.
Mr. Riyaale waxa kaloo uu Dowladdu ku eedeeyay inay ka cago jiideyso wada hadalo ay la furto mucaaradka Jabuuti, si ay isugu soo dhawaadaan labada dhinac.
Xukuumadda Jabuuti, ayaa waxay sheegtay in mucaaradku uu qaadi doono masuuliyadda, wixii Isniintii ka dhacay Caasimadda Jabuuti.
Dowladda Mareykanka oo ugu baaqday Jabuuti inay sii deyso xubnaha mucaaradka ee la xiray
Ciidamada Ciraaq oo ku dhowaanaya qabsashada magaalada Ramadi